Maitiro ekuisa chechitatu-bato kunyorera kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS Sierra | Ndinobva mac
Pese pese apo Microsoft neApple pavanoburitsa vhezheni nyowani yesystem yavo yekushandisa, kuwedzera kune zvekushongedza uye zvinoshanda zvitsva kuitira kuti vashandisi vasarase kufarira kwavari, makambani anogara achiedza kuve nechokwadi chekuchengeteka kwedu. Uye seuchapupu hweizvi isu tine zvigadziriso zvinoramba zvichiburitswa kuti tigone kugadzirisa chero dambudziko rekare, razvino kana ramangwana rekuchengetedza. Asi zvakare gadziridza dzimwe sarudzo sisitimu yekushandisa kuti ubvise sarudzo paunenge uchiisa kana kuita shanduko kuhurongwa. MacOS Sierra yave ichiwanikwa yekurodha kwemazuva mashoma ikozvino.
Pamusoro penyaya dzese dzatakataura pane dzinoverengeka, zvinotiunzira muganho wakadzungairisa vanhu vazhinji uye ndizvo hatichakwanise kutarisa bhokisi izvo zvinotibvumidza isu kuisa isingazivikanwe yechitatu-bato kunyorera.
Zviripachena Apple inoita izvi zvakatinakira, asi kana isu tichida kuisa diki Github kunyorera, kupa inokurumidza uye yakajeka muenzaniso, macOS Sierra inotitumira iwo meseji iyo hazvigoneke nekuti mushambadzi haana kusimbiswa. Izvo pakutanga zvaigona kutimanikidza kuramba kunyorera.
Sezvineiwo tinogona kushandisa Terminal kubvisa izvo zvinorambidzwa uye kuti inoonekwa zvakare muchikamu cheKuchengetedza uye Chakavanzika chemacOS Sierra zvido.
Isa maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS Sierra
Kuti tiite izvi, kutanga pane zvese isu tinofanirwa vhura Terminal uye nyora unotevera kuraira. Kuti tivhure Terminal isu tinofanirwa kuenda kune yekutsvaga yekukudza iri mune yepamusoro menyu, kurudyi kwechidzitiro uye nyora Terminal.
ziso! pamberi patenzi pane mapazi maviri (- -) Tevere isu tinofanirwa kutangazve iyo Tsvaga nemirairo inotevera.
Iye zvino tinofanirwa kuenda kuSystem Preferences> Kuchengetedza uye Kuvanzika uye tichawana sarudzo zvakare izvo zvinotibvumidza isu kuisa yechitatu-bato kunyorera tisati tambove takazivikanwa neApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa yechitatu-bato maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS Sierra
Izvo hazvishande kwandiri, mushure mekupinda kodhi yekutanga iyo inobvunza iyo password, ini ndinopinda mairi ndopinda yechipiri, yechipiri inondipa iyi meseji:
Hapana maitiro anoenderana ako ako akawanikwa
Pindura kuti upedze28
Iwe unofanirwa kuteedzera kuraira kwechinyorwa uye nekuchinamatira mune chinongedzo, chimwe chinhu chaunenge watosara munzira.
Iwo wekupedzisira kuraira unofanirwa kunyorwa uchiremekedza iro repamusoro uye repasi kesi.
Gonzalo Guirao Perez akadaro
Kwandiri zvisingaite, zvinondipa Sudo kukanganisa.
Gonzalo-Guiraos-iMac: ~ gonzaloguirao $ sudo spctl -–master-regedza
sudo: haikwanise kuita stat / etc / sudoers: Mvumo yakaramba
sudo: hapana anoshanda masosi sudo akawanikwa, kurega
sudo: haikwanisi kutanga mutemo plugin
Pindura Gonzalo Guirao Perez
Mhoro! Iko kukanganisa ndekwekuti akaisa "pamberi" tenzi ndiwo manyoro maviri uye iri "pamberi" patenzi. Aya ndiwo maratidziro angaita sudo spctl -master-regedza kodhi
Nhanho yechipiri haishande kwandiri kana
Kopa uye unamate mirairo kubva muchinyorwa mune terminal. Mavara makuru uye madiki anofanirwa kuremekedzwa.
Cristian Contreras akadaro
Ichashanda neKeygen mhando maapplication?
Pindura Cristian Contreras
Ndizvozvo, pakati pezvimwe zvinhu.
Cedric Cartwright Rivera akadaro
Yakashanda zvakakwana kwandiri, nezuro chaiye ndakacherekedza dambudziko iri asi ndakanga ndisina nguva yekuritsvaga uye nhasi mangwanani ndagamuchira ziviso yechinyorwa chako, ndinokutenda zvikuru!
Pindura Cedric Cartwright Rivera
Ini ndaivewo nedambudziko rakafanana nezuro uye zvakanditorera nguva yakareba kuti ndizvigadzirise uye sezvo ndaive ndega ndine dambudziko iri ndakafunga kuiburitsa. Ndiri kufara kuti zvaibatsira.
1. Edza kuisa iyo isina kusaina application
2. Mushure mekukanganisa meseji ichiraira kuti Noa anogona kuiswa, enda kune chengetedzo uye zvakavanzika sarudzo.
3. Pazasi pesarudzo dzekuisa maApple maApp uye vashanduri vakasainwa, meseji inoratidzika inoratidza kuti application haina kuiswa nekuti haina kusainwa uye inobvunza kana tichida kuisa zvakadaro
4. Zviripachena tinya hongu, uye gadza pasina matambudziko.
Ndinovimba zvinokushandira iwe. Avo vasingade kana vasingatsunge kukanganisa neiyo terminal.
Daniel Ramirez Mesa akadaro
Sezvineiwo pachine chimwe chinhu chiripo, nekuti ini ndinoedza kumhanyisa iyo x-simba readobe cs2015 uye rinovhara nekukasira, zvinoitika zvakafanana kune mumwe munhu?
Pindura kuna Daniel Ramirez Mesa
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri ndichiedza kuisa SketchBookPro 2016.
Ndakaita nhanho dzakaratidzirwa uye ini ndinoona shanduko mune zvido, ikozvino ndinogona kuvhura nekuisa chero chishandiso, asi iyo xforce haina kuvhura !!
UNOGONA KUGADZIRA?, SEI?
Pindura kuna kinkullonRaul
Ini ndangouya kuzokutendai, ndanga ndatobhowekana nekupa mvumo yekumba application
Ndine dambudziko rakafanana ne x-simba. Muchiitiko changu ndinongova na2014, ini handina kuwana kupi kurodha pasi (nerumwe chivimbo) iyo keygen
Ndine akati wandei uye zvinoitika kwandiri nezvose. Ndapererwa, handizive kuti ndozvipedza sei. Pane chero munhu anoziva chinhu?
Ini handikwanise kushandisa keygen kumurairidzi pane mac sierra… chero munhu anoziva chimwe chinhu ??
wakakwanisa here kushandisa keygen ne mac sierra?
Francisco Serrano akadaro
Mhoroi, kutanga kwezvose, maita basa kwazvo ndakapererwa, ndakafunga kuti ndoga,
Ini ndinotevera tsananguro, ini ndaisa iwo murairo zvakadaro, ndakanamatira kuti iri kushayikwa rimwe - kune maviri -
Sezvaunotaura, ndakachiisa nekuchinyora, chinokumbira password, ndakachiisa asi hapana kana chinhu chisati chaonekwa
Bhokisi iro, uye zvakadiniko nekutangazve mutsvaga nemirairo inotevera, ndeupi murairo waunoreva kana uri nyore
tangazve komputa, pamwe ndizvo zvandatadza. Ndatenda zvese
Pindura kuna Francisco Serrano
Ini handikwanise kutyora iyo AutoCAD 2016 kana Sketchup. HELPAAA (kurega zvisingatarisirwi)
Imwe nzira yekuzviita ichave nekudzvanya-kurudyi uye kusarudza "kuvhura". Zvirinani zvakandishandira. Ndinovimba inobatsira mumwe munhu. Kwaziso.
Inoshanda zvakakwana. Izvo zvisiri kuvashandira ndezvekuti mamwe maapplication HAAenderane neMacOS Sierra (kusanganisira maKiyi avo, nezvimwewo).
Haunyari here kuva neCHIDZIDZO chakakura seMac, uye kuve uchiisa hutsotsi hwakachena?
Marco Martin akadaro
Kuva neWindows komputa, iyo inodhura € 1500 yakanaka, kunyangwe iwe uine mapirati mapurogiramu anodhura € 120, 250, senge dzakasiyana shanduro dzeMS Office.
Asi chenjera, kana uine € 1500 Mac uye unofanirwa kushandisa AutoCAD (inodhura € 4000), unofanirwa kunyara kuibaya, handiti?
Handiwanzoshandisa pirated software, asi handikwanise kushandisa 4000 euros pachirongwa chandinoshandisa zvishoma nezvishoma uye handigone kupa mapurojekiti ne watermark inoti "AutoCAD yevadzidzi" ... saka keygen uye nguva.
Zvakanaka sei kutonga uye kwete kufunga.
Pindura Marco Martin
Kuuraya mumwe munhu vhiki rega rega, gore rega rega, kana kamwe chete muhupenyu ichiri mhosva. Saka wakangofanana nepirate kana ukaishandisa "zvishoma nezvishoma."
Mhoro shamwari, ndatenda nemupiro wako, ndinokuudza kuti hazvina kundishandira, ndiri kuyedza muMacOS Sierra uye sezviri pachena ndinofanira kudzima System Integrity Dziviriro uye ivo vanoti unofanira kutanga naAlt uye kuburikidza nazvo collect shandisa iyo terminal uye nyora csrutil dzima asi wotangazve neAlt, hazvindipe chero sarudzo yekudzokazve ... Ungave neimwe nzira yekuzviita, kana kuratidza nzira chaiyo yekuzviita? Ndatenda!
Pindura kuna Yasz
Ndakaigadzirisa nenzira inotevera ... Isa "El Capitan" ine Hofisi, Sketchup, Photoshop uye Autocad (Yese iri pachena pirate). Simudzira kune sierra uye zvirongwa zvese zvinomhanya mushe. Kunyange ivo vachiwana imwe mhinduro ini ndinofunga vanogona kuzviita seizvi, Kwaziso.
Screenflow vhezheni 5 haishande muSierra uye vhezheni 6 inokosha 99 maeuro muAppStore. Iri jee?
Pindura kune seamorgan
Efe Uves akadaro
Yakandibvunzawo password, ndakagadzirisa nekumbobvisa password yemushandisi uye ndakakwanisa kuita mirairo ndichiremekedza chaizvo izvo zvinokurudzirwa muchinyorwa chino, ndichigadzirisa sarudzo yaidiwa, iyo yakandibvumira kuvhura chirongwa chandaida.
Ndatenda zvikuru Ignacio
Pindura kuna Efe Uves
Max Jhader Palomino Meza akadaro
Pamusoroi mubvunzo, makaita sei kubvisa password? Ndiri kuedza asi handina kukwanisa kubvisa password, ndokumbirawo mundibatsire
Pindura kuna Max Jhader Palomino Meza
Mhoro! Ignacio! Kutenda nekutumira, chinhu chega ndechekuti iwe wakavhiringidza munhu wese akaisa - "pamberi" tenzi zvishoma. Asi, iri "pamberi" patenzi, zvekuti inoramba iri -master. Avo vakateedzera kodhi kubva pambiru, havawone maviri -, asi "- tenzi-dzima" (dhishi refu).
Iyo kodhi ndeiyi: Sudo spctl -master-regedza
Ndatenda! Inoshanda zvakakwana
Hitch taylor akadaro
Unogona kunditungamira kuti ndibvise chiratidzo kubva kubhawa remenyu? haugone ne cmd uye uchikwevera uye haina kuoneka mune zvido zvesystem, kana mumaapplication uye kubva pachiitiko chekutarisa uchibvisa iyo faira inonzi LTtray inobviswa asi inozoonekazve mushure memasekonzi
Pindura Hitch Taylor
izvi zvinoshanda zvakakwana Sudo spctl -master-regedza # system master switc
Alfredo Vieira akadaro
Ndakaedza asi hazvishande kwandiri. Pandinoisa Killall Finder, zvinoita sekunge inozvigamuchira, asi pandinoenda kuSystem Preferences zvinoramba zvakafanana, pasina shanduko.
Pindura kuna Alfredo Vieira
Aline Flores akadaro
Ndinokutendai zvikuru, ndinowana sarudzo "Chero Saiti" izvozvi enda kana ndichigona kuvhura x-simba kuisa AutoCAD zvakanaka, kurudziro yakakwana
Pindura Aline Flores
Ndine sarudzo "Chero Saiti" asi zvakadaro handina kukwanisa kuvhura X-simba kuisa AutoCAD 🙁